TCL TS6110, fomba mora hananganana teatra an-trano miaraka amin'i Dolby Audio | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 05/04/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 27/03/2021 19:57 | General, hevitra
Amin'ny fahatongavan'i bara fanamafisam-peo amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo HDMI ary ny fivoarany miaraka amina tsiroaroa sy fahaiza-manao marani-tsaina, ankehitriny betsaka noho ny hatramin'izay ny ankamaroan'ny mpampiasa no misafidy ny hametraka rafi-teatra an-trano amin'ny vidiny mora vidy kokoa, zavatra iray izay indray mandeha, tamin'ny vanim-potoana "analog" dia zavatra iray izay saika faran'izay kely tokoa.
Amin'ity trano ity dia tianay haseho anao ny karazana safidy hafa rehetra, ary lavitra ny vokatra avo lenta izay nasehonay anao tao amin'ny sehatry ny sinema Home-Cinema, Izahay dia mitondra anao ny famakafakana lalindalina ny takelaka fanaovana teatra an-trano TCL TS6110, andao hojerentsika ny fomba fitondran-tenany sy ny fiasa mampiavaka azy indrindra.
2 Fifandraisana sy fikirakirana
4 Ny traikefan'ny mpampiasa sy ny kalitaon'ny feo
TCL dia marika ekena ao amin'ny sehatry ny haino aman-jery, na dia efa nahita fitaovana finday natombok'ilay marika aza isika, ny zava-misy dia nalaza tamin'ny fahitalavitra hatrany izy miaraka amin'ny sandam-bola sy ny vokatra vokariny, ity farany. izay no nitondra antsika teto androany. Amin'ity tranga ity dia tsy mamela famolavolana ekena ny TCL mba hanitsiana ny vidiny farafaharatsiny, ary izany no nitranga tamin'ity singa ity izay notsapainay.
Haben'ny feo: 800 x 62 x 107mm
Haben'ny subwoofer: 325 x 200 x 200m
Lanja bara: 1,8 Kg
Lanjan'ny subwoofer: 3 Kg
Vita amin'ny plastika mainty tanteraka, miaraka amina fonosana lamba eo anoloana, manana tsorakazo tsara eo ambany izy mba hampihenana ny hovitrovitra. Ny tapany ambony dia misy mpisafidy haino aman-jery tactile, raha ao ambadiky ny lamba kosa dia miafina ny tontonana LED ny loko izay hanondro ny habetsahana sy ny karazana fifandraisana. Ao aoriana no misy ireo fifandraisana izay horesahintsika avy eo. Ny habe koa dia voafehy ho an'ny Sub, na dia amin'ity tranga ity aza misy lanjany miharihary kokoa noho ny bara fanamafisam-peo sy ny fingotra hampihenana ny fifandraisana.
Manomboka amin'ny fizarana fifandraisana izahay, Voalohany indrindra, nasongadinay fa ny feom-peo dia misy rafitra fifandraisana tsy misy tariby Bluetooth 4.2, nefa tsy manadino ny zava-misy fa ny fifandraisana lehibe dia tsy maintsy avy amin'ny alàlan'ny port HDMI any aoriana na, raha tsy izany, ny fampidirana audio optika. Na izany aza, ho an'ny tsy fahita firy indrindra, misy port USB tafiditra ao koa izay hahafahantsika mampifandray ireo loharanom-peo ary na dia ny taloha iray aza, saingy tsy latsa-danja kokoa, ny fifandraisana 3,5 milimetatra AUX mahazatra.
Ny Sub ho an'ny anjarany dia manana fifandraisana feno mandeha ho azy sy tsy misy tariby miaraka amin'ny tsipika fitenenana amin'ny alàlan'ny bokotra paipa tokana izay hampitsahatra ny jiro rehefa apetraka ilay fifandraisana. Hanavotra tariby antsika izany fa tsy ny tariby mandeha amin'ny herinaratra izay hahaleo tena. Tsotra ihany ny fikirakirana, satria hanome ho laharam-pahamehana hatrany ny fampidirana feo amin'ny alàlan'ny fifandraisana HDMI, Na izany aza, ilaina foana ny mampiasa ny fanaraha-maso ny bara ho an'ny sisa miasa, mihoatra ny fampiakarana sy ny fampidinana ny haben'ny fahitalavitra, izay azontsika atao amin'ny fifehezana mitovy.
Tsara homarihina izany Fonosana roa no tafiditra ao anaty fonosana ahafahantsika mampifanaraka ny bara feo mivantana amin'ny rindrina, ary koa taratasy iray izay hiasa ho toy ny tetika rehefa manao ny lavaka mifanitsy amin'ny rindrina. Zavatra miavaka amin'ny fijerena ny vidin'ny vidiny.
Rehefa avy nilaza ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia manomboka amin'ny fanonona izany ny seranana fifandraisana HDMI dia manana teknolojia ARC, eny, mijanona ao amin'ny HDMI 1.4 izahay. Amin'ny lafiny iray, hamela antsika hifandray amin'ny fanaraha-maso ny fahita lavitra amin'ny fantsom-peo, ary koa handefa sy handray vaovao eo anelanelan'ny fitaovana roa, ary tombony lehibe izany. Amin'ny lafiny iray, ity bara fanamafisam-peo ity dia tsy manana karazana fifandraisana tsy misy tariby ambony.
Manana a 95db fahafaha-manana ambony indrindra mifanaraka amin'ny heriny lehibe 240W. Tsy ratsy ho an'ny tsipika fanamafisam-peo miaraka amin'ny lanjany voafehy toy izany. Amin'ny ambaratonga mifanentana ananantsika 5.1 virtualization homena an'i Dolby, ny tena izy dia na eo aza ny fanaparitahana mafy ny feo avy eo aloha dia manao ny asany ny virtualisation ary mahafinaritra be nefa tsy tsikaritra. Na izany aza, ny baiko dia hahafahantsika mifandimby amin'ny fampitoviana telo isaky ny configurations amin'ny fotoana manokana toy ny: Sinema, TV ary mozika.
Ny traikefan'ny mpampiasa sy ny kalitaon'ny feo
Ny zava-dehibe indrindra amin'ity karazana vokatra ity dia ny kalitaon'ny audio hatrany, indrindra rehefa miresaka momba ny vidiny ambany isika, izay ahitantsika izay rehetra saika. Ny tena zava-misy dia eo ambanin'ny 150 euro ity fanamafisam-peo ity, indrindra ho an'ireo fanampiana. Manolotra antsika bas tena miavaka sy mahaleo tena izy ity noho ilay subwoofer mahaleo tena, Zavatra andrasana amin'ireto karazana vokatra ireto, na izany aza, ampidirina ao izy ireo matetika satria "manarona" ny lesoka ny lesoka hafa amin'ny kalitaon'ny feo, zavatra antenaina.
Somary fisaka ihany ny feo rehefa miresaka fahitalavitra sy mozika isika, tsy dia misy faritra mavitrika kely intsony, avy eo tadidinao ny vidiny ary tadidinao fa mbola kely ny azo angatahina. Amin'ny resaka famokarana mozika, dia azo antoka fa arovana, na izany aza, rehefa filalaovana sarimihetsika ny bass sasany dia afaka manaloka ny dinika, ary izany dia manahirana indrindra amin'ny alina, raha izany dia tsy maintsy milalao miaraka amin'ireo maody fikirana preset miaraka amin'ny lavitra ianao.
Raha afohezina Mahita vokatra boribory somary mandinika ny sokajin'ny kalitaon'ny vidiny izahay, hahafahanay mankafy ny teatra an-trano amin'ny toe-javatra tena tsara ary mampiroborobo ny tenanay amin'ny ambaratongam-peo mahery vaika tokoa. Vitsy ny safidy hafa mitranga amiko amin'ity sokajy vidiny ity izay misy rindrina rindrina, subwoofer tsy misy tariby misaraka ary HDMI ARC. azonao atao ny mijery an'i Amazon amin'ny 150 euro, ary amin'ny azy manokana Tranonkala TCL.
Navoaka tamin'ny: 5 Aprily 2021
Fitaovana sy famolavolana kanto
Fanamorana mora ny fametrahana
Subwoofer mahaleo tena sy ny tontolon'ny Dolby Audio 6
Feo somary fisaka
Bass dia afaka mifanindry amin'ny fifanakalozan-kevitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » TCL TS6110, fomba mora hananganana teatra an-trano miaraka amin'i Dolby Audio
Sonos Roam, kely nefa masiaka [REVIEW]